ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ရိုဟင်ဂျာအရေး ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ)
ရိုဟင်ဂျာအရေး ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ)
ဘယ်က ရိုဟင်ဂျာလည်း ကြည့်လုပ်ပါဦး။
ဒီပြသနာက ရှုတ်ထွေးမှုတွေ များတယ် ၊
ဘင်္ဂလီတွေ ဒုက္ခရောက်နေ၊ အသက်အန္တရာယ် ရှိနေ ၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခံနေရပါတယ် စွတ်စွဲနေကြတယ် ၊
မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း နိုင်ငံတကာအလယ် မှာ အမျိုး၂
အစ္စလမ်နိုင်ငံ တွေကလည်း မခံမရပ်နိုင် လာကြည်.ကြတယ် ၊
ဘင်္ဂလီတွေ ကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် ဦးရေ ဘယ်ရွေ.ဘယ်မျှ
လက်ခံမယ်ဆိုတာတော. မရှိဘူး။ အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေမှာ ဧရိယာကျယ်ဝန်း ၊ လူဦးရေနည်း
ငွေကြေး ကြွယ်ဝတဲ. နိုင်ငံတွေ မှာ လူသားအရင်းအမြစ်
တွေ လိုနေရက်နဲ. ရခိုင်နယ်စပ် က ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်
တွေကို လက်ခံ ခေါ်ယူမှုမရှိတာကတော. ရည်ရွယ်ချက်
ကြီးလွန်း အားကြီးနေတယ်ထင်တယ် ။
လူသားတွေ ၊ကလေးသူငယ်တွေ ၊ ငတ်မွတ်နေတဲ.သူတွေ ၊
9/11 လို မျိုး ရင်ဆိုင်ခဲ.ရပြီး ယနေ. အထိ လိုက်
လက်တုန်.ပြန်နေလို.အားမရနိုင်သေးတဲ. U.S နဲ.
အနောက်နိုင်ငံတွေ အနေနဲ.မြန်မာနိုင်ငံရဲ. ရခိုင်နယ်စပ် အရေးသုံးသပ်
ရာမှာလည်း invade အလုပ်ခံရသူချင်း ကိုယ်ချင်းစာ သုံးသပ် သင်.ပါတယ်။
ဘယ်မြန်မာနိုင်ငံသား မှလည်း မငြိမ်းချမ်းတဲ. လူမျိုးရေး
ပဋိပက္ခ မျိုး ဆင်နွဲဖို. စိတ်မပါကြပါဘူး ။